FIFIDIANANA BIRAON’NY HOLAFITRA: Kihon-dalana ho an’ny asa fanaovan-gazety anio – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 1:39
Accueil/Politika/FIFIDIANANA BIRAON’NY HOLAFITRA: Kihon-dalana ho an’ny asa fanaovan-gazety anio
Araka ny efa nifanomezana, anio no tontosaina manerana ny Tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny fifidianana izay handrafitra indray ny birao vaovaon’ny Holafitry ny Mpanao Gazety eto Madagasikara. Na eo aza ny adihevitra samihafa mandeha ankehitriny, ny azo ambara dia ho kihon-dalana lehibe ho an’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety ity anio ity, izay hanavaozana indray ny birao teo aloha izay efa lany fepotoam-piasana tany amin’ny efa-taona lasa.
Lucien R. 16 octobre 2021
Araka ny efa nohamafisin’ny Vaomiera itambarana misahana ny fikarakarana ny fifidianana dia tsy misy fiovana ny fandaharam-potoana rehetra amin’ity anio ity mahakasika ny fifidianana izay ho Filohan’ny Holafitry ny Mpanao Gazety. Fifidianana izay hitondra ainga vao sy endrika vaovao indray ny Holafitry ny Mpanao Gazety eto Madagasikara. Tsara tsindriana hatrany fa efa an-taonany no lany fepotoam-piasana ireo eo anivon’ny Biraon’ny Holafitry ny Mpanao Gazety ankehitriny, ka rariny raha hirosoana ny fifidianana. Ny zotram-pifidianana rahateo nanaja tanteraka izay voahajan’ny fehezan-dalàna rehetra mifandraika amin’izany.
Araka ny toromarika, noho izany, dia amin’ny 8ora maraina no misokatra ny birao fandatsaham-bato rehetra ary tsy hikatona raha tsy amin’ny 4ora tolakandro. Marihina fa eny amin’ny renivohi-paritra no hisy ny biraom-pifidianana, ka ireo vaomiera isam-paritra no mandamina izany.
“Ho an’ny Faritra Analamanga manokana dia etsy amin’ny trano fivorian’ny Commission Nationale pour l’Unesco eo Antanimena no hisy ny Birao fandatsaham-bato”, hoy ny fanazavana. Ny Karapanondrom-pirenena no entina mifidy. Ary ireo izay voasoratra anatin’ny lisitr’ireo mpanao gazety nahafeno fepetra navoakan’ny vaomiera ny 01 Septambra 2021 ihany no afaka mifidy.
Fanozongozonana ny Fanjakana…
Omaly, nisy ny fandaharana “Tsy ho tompon-trano mihono” niarahana tamin’ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo. Fotoana izay nitondrany fanazavana mahakasika ireo tsikera sy adihevitra rehetra voizina momba ity fifidianana ity. Nahitsy ny Minisitra nilaza fa tsy ny fifidianana loatra no tena olan’ireo andiana mpanao gazety manohitra ny fanatanterahana izany ankehitriny. Nambarany fa efa fanozongozonana Fanjakana mihitsy no tanjona ao anatin’ny hetsika. Manaporofo izany ny fiarahana amin’ny antoko mpanohitra tany Toamasina. Teo koa ny voalaza fa fotoam-bavaka natao teto Antananarivo izay nahitana endrika mpanao politika. Ny mampalaelo dia misy ireo mpanao gazety namana no voafandrika sy voafitaka ao anatin’izay kajikajy politika izay, hoy ny Minisitra. Tafiditra ao anatin’izany ny Filohan’ny Fikambanan’ny Mpanao Gazety vehivavy, izay nangataka ny hanemorana ny fifidianana. Nambaran’ny Minisitra fa tsy misy mihitsy fanazavana araka ny lalàna manery ny tsy maintsy hanemorana ny fifidianana hatreto.
Manoloana ny filazana fa kandidam-panjakana ny Kandida tokana izay nirotsaka hofidiana tamin’ity fifidianana ity, dia nilaza ny Minisitra fa tsy nanery velively an’I Monica Rasoloarison anao kandida ny tenany. Notsindriany fa fifandresen-dahatra no nisy teo amin’ny roa tonta, mitovy tamin’ireo mpanao gazety nikasa hirotsaka hofidiana rehetra izay nanatona ny Minisitra. Ampahany tamin’ny resaka nifanaovan’ny Minisitra sy ny Kandida Monica mihitsy aza ireo horonampeo aparitaka ankehitriny, izay sady iniana havoaka ao anatin’ny hodidiana misy azy mba hampisy fanakorontanana sy hampandaingana olona etsy sy eroa.
RAHARAHA APOLLO 21: Voarohirohy telo naiditra eny Tsiafahy, telo hafa any Imerintsiatosika
ADY AMIN’NY KOLIKOLY ETO MADAGASIKARA : Niadian’ireo senatera hevitra ny lalàna mifehy ny PAC